Askar Kenyan ah oo xabsi ku muteystay dil ay u geysteen hooyo Soomaaliyeed | Dayniile.com
Home Warkii Askar Kenyan ah oo xabsi ku muteystay dil ay u geysteen hooyo...
Askar Kenyan ah oo xabsi ku muteystay dil ay u geysteen hooyo Soomaaliyeed
Maxkamadda Sare ee Ismaamulka Garissa ee gobolka Waqooyi-bari Kenya ayaa maanta 10 sano oo xabsi ah ku xukuntay labo sarkaal oo booliiska Kenya ka tirsan, kuwaas oo lagu eedeeyay inay saddex sano kahor Cabdiya Cumar Aadan ku dileen deegaanka Ramu ee Ismaamulka Mandheera.
Sidee ayuu dilku u dhacay?
Sidee ayaa loo arkay xukunka maxkamadda?
Cabdinaasir Aadan Ibraahim oo ka mid ahaa qareennadii u doodayay Cabdiya oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay inaysan ku faraxsaneyn xukunka lagu riday labada sarkaal, isagoo sheegay inay maxkamadda ka filayeen inay xukun adag ku riddo saraakiishan, balse ay ixtiraamayaan go’aanka maxkamadda.
“Nimankan way ku caddaatay inay dembiga galeen, sharciga Kenya waxaa dilka uag yaalla xabsi daa’im, waxaan marka fileynay inay maxkamaddu taas ka dhawaajiso,
Dad kale ayaa xukunkan u arka mid aad muhiim u ah, iyadoo ay sheegayaan inuu yahay kii ugu horreeyay noociisa ee ka dhan ah dilalka sharci-darrada ah.
Cabdinaasir ayaa sheegay inay ka fekerayaan wixii ay ka dhihi lahaayeen xukunka maxkamadda, iyagoo heysta muddo labo toddobaad ah si ay racfaan uga qaataan.Wuxuu qudhiisa qirayaa in xukunka maxkamadda uu yahay guul weyn oo gobolka u soo hoyatay, balse wiixi laga dhihi lahaa ay kala hadli doonaan qoyska Cabdiya.
Previous articleMadaxweynaha Galmudug oo shir guddoomiyay kulanka Golaha Wasiirada
Next articleSoomaaliya oo ka hadashay diyaarado qiimo hoose ku iibineyso Kenya, kuwaasi oo ay lahaayeen ciidamada xoogga Soomaaliya.